भिम रावल यस कारण उमेद्वारी फिर्ता लिन तयार Canada Nepal
भिम रावल यस कारण उमेद्वारी फिर्ता लिन तयार
काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन चितवनमा भव्यताका साथ अघि बढिरहेको छ । आज बन्द सत्र र उमेद्वारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम तालिका रहेको छ ।
यस महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओलीसंग नेता डा. भिम रावल पनि लड्ने गरि उमेद्वारी दिने तयारी गरिरहेका थिए तर बन्द सत्र सुरु भए संगै भिम रावलले आफ्नो उमेद्वारी फिर्ता लिन तयार भएका छन् ।
दिउँसोसम्म भिम रावलले आफू उमेद्वारी फिर्ता पनि नलिने र यस विषयमा अध्यक्ष ओलीसंग कुनै सम्झौता समेत नगरेको बताएका थिए । त्यहि अनुरुप डा. रावलले आफ्नो लागि भोट सम्म माग्न थालिसकेका थिए । तर अन्त्यमा भिम रावलले आफ्नो उमेद्वारी फिर्ता लिन राजी भएका छन् ।
सबै पदका लागि सर्वसम्मत भईसकेको र यहि अध्यक्ष पदका कारण मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछी भिम रावलमाथि चौतर्फी दबाब आएपछि आफू पछि हट्न लागेका हुन् । भिम रावलले आफू केपी ओलीसंग कुनै पनि हालतमा जित्न नसक्ने बुझेर नै उमेद्वारी दिन लागेका थिए । तर अन्त्यमा सबै पदाधिकारीहरु सहमति मै फाईनल भएको र सकेसम्म सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरु समेत सहमति मै टुंगिने भएका कारण नेता रावलले उमेद्वारी फिर्ता लिने भएका हुन् ।
भिम रावलले उमेद्वारी फिर्ता लिने निर्णयसंगै अब एमालेको महाधिवेशन समय मै सकिने भएको छ । बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी ओलीको लामो मन्तव्यका कारण महाधिवेशन समय मै नसकिने हो कि भन्ने थियो तर डा. रावल सहमतिमा आउन तयार भएपछी महाधिवेशन समय मै सकिने भएको छ ।
भिम रावलले आफ्नो उमेद्वारी फिर्ता लिएसंगै अरु मुख्य पदाधिकारीहरु सहमतिमा टुंगो लागिसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वांगलाई सहमतिमा ल्याउन हम्मे हम्मे परेको थियो तर आज बिहान मात्र सुवास नेम्वांग सहमतिमा आएपछि अब निर्वाचन नहुने देखिएको छ ।
भिम रावल कै कारण सर्वसम्मतिको प्रयास अड्किएको थियो तर अब भिम रावलले सहमतिमा आउन तयार भएपछी नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ । भिम रावलले बन्द सत्रमा आफू उमेद्वारी नदिने बताउने भएका छन् ।
मंसिर ११, २०७८ शनिवार १९:०१:०२ बजे : प्रकाशित